Birmingham to host Zimbabwe Fashion Week UK in July - The Afro News
Home » Birmingham to host Zimbabwe Fashion Week UK in July
18th February 2015: Emerging designers from Zimbabwe will showcase their designs at Zimbabwe Fashion Week UK in Birmingham on 4th July 2014.
Zimbabwe Fashion Week UK is being organised by a group of designers and culture vultures who love all things Zimbabwean.
The organisers promise that the event will showcase some of the most exciting Zimbabwean designers working today.
Founder of Zimbabwe Fashion Week UK, Chiedza Dawn Ziyambe said: “We aim to bridge the perceived gaps between Zimbabwean fashion and global fashion trends. This showcase will give Zimbabwean designers the opportunity to reach out to consumers globally and help them gain the recognition they deserve in the UK fashion industry.”
Designers and sponsors who would like to be part of the Zimbabwe Fashion Week UK are urged to contact Dawn on 07845062100.
The event will be held at The Crown Banqueting Hall, Birmingham on 4th July 2015.
More information about Zimbabwe Fashion Week UK can be found at zimbabwefashionweekuk.com